Hlawula ngokucofa: Imiba emi-4 yokuThengisa iiNjini yokuKhangela ebuhlungu
NgoLwesithathu, ngoFebruwari 16, 2011 NgoLwesithathu, ngoFebruwari 16, 2011 UChris Bross
Ayinamsebenzi ukuba ungakanani imfundo oyibekayo kuthethathethwano olutsha, iVenkile yokuKhangela kwiNjini yokukhangela iya kuvela xa ungalindelanga. Ndichonge uluhlu olufutshane lweeVillains thina, kuzo EverEffect, Kubonakala ngathi kuza kuthi gqi amathemba amatsha.
Ngaba ukhe waziqonda ezi zinto?
Ukungabikho kweNjongo - Sukuxela ukuba ufuna ukuchitha malini, ndixelele ukuba ufuna ukwenza malini
Kwintlanganiso nganye entsha sibuza umbuzo, "Zithini iinjongo zakho zeshishini?". Kwaye phantse lonke ixesha impendulo ithi "qhuba ukugcwala ngakumbi" okanye "isikhundla kumagama athile aphambili". Iqabane lakho lokuThengisa kwiinjini yokukhangela kufuneka liqonde ukuba yintoni eyenza ishishini lakho liqhubeke. Emva koko sinokujolisa kumagama aphambili ekunene aya kuqhuba ukugcwala komgangatho kwiwebhusayithi yakho. Ukusilela ukulungelelanisa ishishini lakho kunye nokukhangela iinjongo zokuthengisa sesinye sezona zinto zibangela ukusilela kwentengiso kwi-Intanethi.
Ukunqongophala kwezixhobo kunye nokuzibophelela - Ukunqongophala kwezixhobo kuxhome abantu abaninzi
Ngaphandle kwamathandabuzo uyakufuna izixhobo ukufikelela kwiinjongo zakho zentengiso zenjini yokukhangela. UShirley Tan Ubhale iposti entle kwi-SearchEngineLand kwiveki ephelileyo malunga nale nyani. Amashishini awayiqondi ngokupheleleyo into yokuba ukuze uphumelele kufuneka izibonelelo zabasebenzi kunye nokuzinikela kwezemali. Ukuqhuba ngakumbi ukugcwala kwiWebhu kwindawo yakho akuvumelekanga. Zimbalwa kakhulu iinkampani ezinemithombo eyaneleyo kwasekuqaleni ukufezekisa iinjongo zazo.
Ukungabikho komonde kunye nokugxila - Akukho nanye kwizinto osele uzigqibile eya kuba neXabiso ukuba awuqhubeki usukela impumelelo
Kunqabile ukuba iphulo lokuthengisa likhangele emva kwenyanga enye okanye ezimbini. Kukho isizathu sokuba abaCebisi beeNtengiso zeNjini yokukhangela bafuna ukuba amashishini atyikitye isivumelwano seenyanga ezi-6 okanye ezili-12. Ukufikelela kushishino 'kwiinjongo ezinqwenelekayo kuthatha ixesha. Ukulungiswa kweinjini yokukhangela (i-SEO) ayisiyiyo enye kwaye yenziwe. I-SEO yinkqubo eqhubekayo yokwenziwa kwesiza kunye nokusebenza okungaphandle kwesiza. Hlawula ngokokuCofa (PPC) akuseti kwaye ulibale. I-PPC yinkqubo eqhubekayo yokuphucula ukufumana eyona buck yakho.
Ukusilela koqwalaselo kunye nokwenza - UMtyholi ukwiNkcukacha
Isicwangciso sakho seshishini kunye nentengiso ye-Intanethi sinokungabi nasiphako, kodwa ukungabikho kwengqwalaselo kunye nokuphunyezwa kungangqina esona sicwangciso silungileyo. Ukunganikeli ngqalelo kunye nokwenza uphuculo kuhlala kukhokelela kumathuba alahlekileyo okukhulisa i-ROI. I-SEO ayisiyiyo yonke into malunga nolwakhiwo lwekhonkco, ukuthathela ingqalelo ukwandiswa kwesiza sakho kunokunyusa kakhulu isikhundla. Ukufika kwamaphepha kubalulekile ekuguquleni i-PPC traffic. I-PPC ayikho malunga nokunciphisa iindleko zakho ngoCofa, imalunga nokuthoba eyakho Iindleko ngokuGuqulwa.
tags: amazon s3imarikeLinganisa i-CPimyono
Feb 18, 2011 ngo-5: 23 PM
Ndiza kufunda nayiphi na iposti yebhlog enomfanekiso ovela kwiOfisi yendawo. Ngapha koko, uza neendawo ezintle. Kubaluleke kakhulu ukuba abathengi baqonde ukuba ngokungafaniyo nezinye iindlela zokuthengisa, kuhlala kuthatha ixesha kwi-Intanethi ukwakha uphawu lwakho kunye nobukho kwiinjini zokukhangela. Umonde uyimfuneko.
Feb 18, 2011 ngo-9: 26 PM
U-Lumbergh ngumlingisi we-movie weklasi!
Uthetha inyani… Umonde uyimfuneko kuyo nayiphi na inxaxheba yokuthengisa kwi-Intanethi.
Feb 19, 2011 ngo-10: 57 PM
"Kunqabile ukuba umkhankaso wentengiso yokukhangela usebenze emva kwenyanga enye okanye ezimbini".
Ke kutheni kukho intengiso ngasekhohlo kwesi sithuba - kathathu kwindawo yakho yezithuthi kwiiyure ezingama-48?
Uyilo lweWebhu yaseToronto
Meyi 3, 2011 kwi-8: 30 AM
Ngokusebenzisa i-PPC njengesixhobo sokuthengisa kwi-intanethi, indawo yeshishini akufuneki yenze naluphi na utshintsho ekuhlawuleni amazinga aphezulu enjini yokukhangela.